Kuyabhujwa yi-Covid ezikhungweni zokumaka - Ilanga News
Home Izindaba Kuyabhujwa yi-Covid ezikhungweni zokumaka
Kuyabhujwa yi-Covid ezikhungweni zokumaka
Kuthiwa kunothisha abenqabe ukuhlolwa kugula uzakwabo
UNobhala weSadtu KwaZulu-Natal, uNkz Nomarashiya Caluza, uthe ziyanda izikhu-ngo okutholakala kuzona abahaqwe yiCovid-19.
ZIFUNA kuvalwe izikhungo zokumakela umatikuletsheni KwaZulu-Natal izinyunyana zothisha emuva kokuvela kwezindaba zokushona kukathisha wesibili esikhungweni okumakelwa kusona eMtshezi.
NgoMsombuluko ILANGA labika ngokushona kukathisha eMtshezi kwavela ukuthi uthathwe yiCovid-19. izolo ngoLwesithathu lithole ukuthi kushone omunye, kwatholakala othisha abawu-24 okuthiwa bahaqwe yiCoronavirus, edala iCovid-19, esikhungweni esifanayo.
Akukhona eMtshezi kuphela lapho kuphume khona isidumbu, nakwesinye isikhungo esiseNanda, eThekwini, kushone omunye uthisha.
UNobhala weNational Teachers’ Union (Natu), uNkk Cynthia Barnes, utshele ILANGA ukuthi sebephakamise ukuba zivalwe noma izinsuku ezimbili izikhungo, kuhlolwe othisha.
“Iyathusa indlela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal obudedengu ngayo kulolu daba. Ungqongqoshe uhamba ekhohlisa abantu emphakathini ethi othisha bahlolwa usuku nosuku.
“Mhlawumbe kumele ungqongqoshe afundiseke ukuthi ukuhlolelwa lesi sifo nokuhlolwa kwezinga lokushisa emzimbeni kusho ukuthini. Sithi makumiswe ukusebenza, othisha bahlolwe, abatholakala behaqekile bahoxiswe ekumakeni, kuthunyelwe abanye nabo abazongena ngesitifiketi semiphumela yokuhlolwa,” kusho uNkk Barnes.
Uthi umnyango kawukhombisanga ukukhathalela impilo yothisha ngendlela olusingathe ngayo lolu daba, wathi nabo othisha kumele kungene kugxile kubona ukuthi emhlabeni umuntu ufa kanye.
Uthe bebephakamisile emnyangweni ukuthi mabahlolwe othisha ngaphambi kokumaka, kodwa bashaywa indiva.
“Imigomo ebizolandelwa beyenziwa yibona (abomnyango), kabayenzi nathi. Le nto kayihlelwanga ngokubambisana nathi,” kusho uNkk Barnes.
UNobhala weSadtu KwaZulu-Natal, uNkz Nomarashiya Caluza, uthe akusisona lesi sikhungo sodwa okutholakale kusona izinkinga ngoba eMfolozi naseVukile, sekutholakale abanye othisha abahaqekile.
“Ngaso sonke isikhathi uma kuzomakwa amaphepha kuhlale kunezinkinga, kulokhu kubuhlungu kakhulu ngoba kuthinta impilo yabantu.
“Sihambele izikhungo eziningi sathola izikhalo,” kusho uNkz Caluza.
Uthi basalindele umnyango ngale nkinga eqhubekayo ezikhungweni zokumaka.
Uthe kubalulekile ukuba kukhucululwe ngezibulalimagciwane ezikhungweni osekubikwa kuzona lezi zigameko.
Utshele ILANGA ukuthi iSadtu isukumele phezulu, yawubiza umnyango ngaphambi kokuba kuqalwe uhlelo lokumaka ngoba bewuthule.
“Siwubuzile ngalokhu ngaphambi kokuba kuqalwe ukumaka, wathi kawunalo uhlelo lokuthi othisha mabahlolwe. Konke lokhu ukuhlele wodwa, hhayi nathi.
“Kwalona uhlelo lokumaka sawubiza ngenkani ukuba uzokwethula izinhlelo zawo ngalo,” kusho uNkz Caluza.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthe lolu daba lubaluleke kakhulu. Uthe bayanxuswa othisha ukuba bazivikele ezikhungweni.
“Othisha bayahlolwa usuku nosuku izinga lokushisa kwabo. Sikholwa wukuthi izinga lokushisa yilona elingasicacisela uma kukhona okungahambi kahle kuthisha bese siyamqhelisa kwabanye, anikwe usizo olusheshayo,” kusho uMnu Mthethwa.
UMnu Ray Pennston obhekelele uhlelo lokubhalwa kwezivivinyo nokumakwa kwamaphepha KwaZulu-Natal, uthe umnyango kawubanga nobudedengu, ukwenze konke ukuqinisekisa ukuthi abamakayo baphephile.
“Sicelile ukuthi abazizwa benezimpawu mabaphumele obala,” kusho uMnu Pennston.
Leli phephandaba lithole ukuthi eSikhawini FET lishone izolo ngoLwesithathu sekugula abamaki ababili abatholwe behaqekile.
Abawu-9 abebehlala nabo endlini kabavumanga ukuhlolwa futhi bayaqhubeka nokusebenza.
Kwenzeka lokhu nje, bangaphezulu kuka-1 000 othisha abadlule neCovid-19 kuzwelonke.
ohlelweni lokungena ezikhungweni okumakelwa kuzona, ezinye zezifundazwe okubalwa i-Eastern Cape neGauteng ziqale ngokubahlolela i-Covid-19 bonke othisha abebehlonzwe ekumakeleni umatikuletsheni.
Previous articleInjabulo kwabeChiefs ivuka ngoSuthu
Next articleBasale nomgodi kuphambana izidumbu